कुनै पनि वेब अनुप्रयोग को लागी3आवश्यक आवश्यकताहरु Martech Zone
मंगलवार, जुलाई 1, 2008 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
अधिक र अधिक, म आफैँ विक्रेता र कम्पनीहरु मा सोध्छु समान प्रश्नहरु मा बारम्बार। यदि तपाईं आफ्नै अनुप्रयोग विकास गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यी features सुविधाहरू हुन् जुन तपाईंको आवेदनमा एक दिनबाट एकीकृत गर्न आवश्यक छ यदि तपाईं पछि स्रोतहरूको संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने।
के तपाइँको अनुप्रयोग गर्छ ...
एक छ एपीआई? यो विशेष वा वेब सेवा हुनु आवश्यक पर्दैन ... कुनै पनि ओएल 'प्लेन XML ले गर्दछ। हामी यसलाई हाम्रो अनुप्रयोगमा कुनै दिन एकीकृत गर्न चाहन्छौं स्वचालित रूपमा र हाम्रो ग्राहकहरूको लागि बहुविध टेक्नोलोजी भएको प्रबन्ध गर्न सजिलो बनाउँदछ। यदि मैले आज एउटा अनुप्रयोग सुरू गरें भने, म बाट काम गर्ने छु एपीआई बाहिर, प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको बारेमा चिन्ता पछि ... सायद युआई मार्फत एकीकृत भए पनि एपीआई सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले यसलाई पर्याप्त रूपमा निर्माण गरेका छौं।
एक एजेन्सी सुविधा छ? हामी तपाईको ग्राहकलाई तपाईको अनुप्रयोगमा बेच्न चाहान्छौं, तर हामी यसलाई सक्षम पार्न चाहान्छौं। यहाँ उदाहरण छ: किन डोमेन रेजिष्टरहरूसँग एजेन्सी खाता छैन जहाँ ग्राहकले डोमेनको स्वामित्व कायम राख्न सक्छ, तर एजेन्सीले व्यवस्थापन गर्न सक्दछ ... र दर्ताको लागि पनि भुक्तान गर्न सक्दछ? मैले आज राति मेरो रजिस्ट्रार लेखें र यसको सिफारिश गरें।
एक उद्यम सुविधा छ? अधिक र अधिक कम्पनिहरु केवल सानाको संग्रह हो। रिपोर्टिंग संगठनमा जति तहमा समग्रमा हुनुपर्दछ। क्षेत्रीय प्रबन्धकलाई खातामा डिभिजन VP मा राष्ट्रपति… सबैको पहुँचका लागि अनुमतिहरू साथै बीचमा कुनै पनि तहमा सारांश रिपोर्टिंगको लागि सक्षम हुनुपर्दछ।
तपाईलाई चाहिएको कुरा गर्नुको खास आवश्यकताहरू साथै सुरक्षा आवश्यकताहरू सधै लागू हुन्छन्; जहाँसम्म, मैले माथि उल्लेख गरेको आवश्यकताहरू प्रायः बेवास्ता गरिन्छ वा पछि विकास गर्न ब्याकलगमा राखिन्छ। तिनीहरू ब्याकलगमा धूलो स collecting्कलनको लागि बाँध्छन्, तपाईंको कम्पनीको सफ्टवेयरले गरेझैं।
यदि म वेब २+ विश्वमा भेन्चर क्यापिटलिस्ट फन्डि technology टेक्नोलोजी व्यवसाय गर्दछु भने, यी मेरा आवाश्यक हुन्छन्। यदि तपाईं कम्तिमा यी सुविधाहरूको योजना गर्दै हुनुहुन्न भने, म विश्वास गर्दछु कि म मेरो पैसा कतै लैजान्छु। यदि म एक सम्भाव्य हुँ, म प्राय: गर्छु।
टैग: कोडइन्फोग्राफिक्स डिजाइनप्रभावकारीहरू फेला पार्नुहोस्फन्टहरूGoogle +इफ्रेमiframe ब्रेकरपरियोजना टेम्प्लेटprwebwordpress लगइन
LinkedIn के हो?
जुलाई,, २०१ at 2::2008। बिहान
तपाईंको डोमेन पंजीकरण को लागी एजेन्सी सुविधा को विचार शानदार छ। मलाई मेरो प्रोजेक्टको लागि त्यहि चाहिन्छ।
म बिल्कुलै एजेन्सी फिचर मनपर्दछ। म एक टन डोमेन बनाउँछु र जान्न चाहान्छु कि वास्तविक डोमेन मेरो ग्राहकको नाममा दर्ता भएको छ तर म अझै पनि उनीहरूको लागि डोमेन व्यवस्थापनको १००% नियन्त्रण राख्न सक्छु। मलाई लाग्छ क्लाइन्टहरूले यो मनपर्दछ साथै यसले डर हटाउँछ कि सल्लाहकारहरूले उनीहरूलाई उनीहरूको डोमेन नामको साथ ब्ल्याकमेल गर्न सक्दछन् यदि उनीहरू बीचको सम्बन्ध कुरूप हुन्छ।
जुलाई १,, २०१ at १::2२ अपराह्न
१००% तपाईंसँग डौगसँग सहमत छन्, एपीआईको बारेमा। र एजेन्सी सुविधा ... उत्कृष्ट विचार !. वेब अनुप्रयोगहरू = भविष्य